Min Thu 2345, Author at Web Development, ERP Software and Mobile App Yangon Myanmar
Odoo ERP, Web and Mobile App Services
Our Main Site >>
Articles posted by krist
Covid ကာလအပြီး အရင်ထက် Company များရဲ့ E-commerce နှင့် Online Serviceပိုင်းမှာ Global Data အရ $6.5 trillion အထိတိုးတက်နေပါတယ်။
လူတိုင်းက Web Technology တွေကို ပိုမို ထိရောက်စွာအသုံးချ နေကြပါပြီ။ လူငယ်များ အတွက် ပိုမို အောင်မြင်တဲ့ လမ်းကို လျှောက်နိုင်ဖို့ မိမိကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Web Engineer တစ်ယောက် အတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အလုပ်အကိုင်များ>>>
1. Web Developer & Full Stack Developer
2. Front-end & Back-end Developer
3. ERP System & Odoo Developer
4. Web App & Software Developer
5. iOS & Android Developer
ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ Company များတွင် လစာကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
လူငယ်တိုင်းရဲ့ အိမ်မက် များကို အလွယ်တကူ နှင့် အမြန်ဆုံးအကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဖို့Myanmar’s No. Professional Web Trainingအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Page Myanmar မှာ လက်တွေ့ကျကျလေ့လာရင်း အောင်မြင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို စတင်နိုင်ပါပြီ။
အမှတ်-၃၀/B, ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း, လှည်းတန်း, ရန်ကုန်။
Hotline- 09 25 43 43 133 www.PageMyanmar.com
krist0Comments
React Native ဖြင့်သင်သည် iOS ရော Android အတွက်ပါနောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာမြင့် application များကိုတီထွင်နိုင်သည်။
၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောPlatform များအားလုံးတွင်တစ်ခုတည်း codebase ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ် ထားပါသည်။ Facebook Company ရဲ့ ဖန်တီးမှု လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါလင့်မှာ React အသုံးပြု တည်ဆောက်ထားသည့် Application များကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ERP System သည် ယနေ့ခေတ် Business Processes အမျိုးမျိုးအတွက် Cloud Database ကို အသုံးပြု၍ ပိုလျှံနေသော လုပ်သားအင်အားကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာများကို ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်ပြီး ရိုးရှင်းစေရန်။
Web နည်းပညာ အသုံးပြုထားသော ERPစနစ်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် အမြတ်အစွန်းကိုတိုင်းတာရန် အတွက်မိမိလုပ်ငန်းဌာနများအားလုံးမှ စုဆောင်းရရှိသောအချိန်နှင့် တပြေးညီအချက်အလက်များကို ERP အသုံးပြုသူများက ကြည့်ရှုနိုင်သော Dashboard များပါ ၀ င်သည်။
Company ကြီးများ အားလုံး မဖြစ်မနေ အသုံး ပြုသော System ဖြစ်ပါတယ်။ ERP ပိုင်းကို ရေးသားနိုင်သော Web Application Developer များသည် Project Fees အနည်းဆုံး $3000 လောက်မှ စပြီ ပြည်တွင်း ပြည်ပ Company များမှ ဝင်ငွေ မြင့်မားစွာ ရရှိနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ Odoo ERP System များ ကို Market Leader Company ကြီးများမှာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင် တဲ့ Programmer လိုအပ်ချက်မြင့်မားနေသလို ရပ်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ နည်းပညာပိုင်းအတွက် အဆင့်မြင့်ဆုံး System များဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar’s No.1 Professional Web Training
🏢ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပCompany ကြီးများမှာ
Web Application Developer, Python Programmer(Odoo-ERP-System) &
🈸Web Engineer တစ်ယောက်အနေဖြင့် 🇯🇵 Japanနိုင်ငံမှာ
တစ်လ 💴ယန်း200,000 (မြန်မာငွေ26သိန်း)
💵$3000 အထိ ရရှိနိုင်မဲ့ ERP Projects ကြီးများ ကို
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုပြီးသူ များ Computer အခြေခံ ရသူတိုင်း
Programming Language ကို ပိုင်နိုင်အောင် အခြေခံမှ စပြီး
Web Application Projects များ ကိုယ်တိုင် ရေးသားနိုင်သည့်အထိ
Project Director ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Web Application Development, Odoo ERP, Mobile Application
ပိုင်းများ ကို လက်ရှိ
Market Leader Company ကြီးများ ကို တာဝန်ယူ
👨‍💼Web Engineering Course with On Job Training👩‍💼
📗Module 1(Web Development)
HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, PHP Programming, MYSQL Database, WordPress CMS, Drupal
📕Module 2(Web Application & Software Development)
C++, Python Programming, Odoo ERP System,
Java OOP & Django Framework
📘Module 3(Mobile Application Development)
💻Module တစ်ခုစီ ကို Projectများလက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်လေ့လာရမည်။
🎯Facebook, Instagram, Messenger, Google, YouTube, Websiteများ, Applicationများ နှင့် Game များတွင် Digital Marketing ပိုင်းဖြင့် ထိရောက်စွာ Online Ad ပြုလုပ်နိုင်ရန် လက်တွေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကာလပြီးလျှင် လုပ်ငန်းခွင်အတွက် On Job Training ပါ ဆင်းခွင့်ရမည်။
Web Engineering course ရဲ့ Module တစ်ခုစီမှာအဓိကတင်ရမဲ့ Project တွေက
✅ HTML5,CSS3 ဖြင့် Static Website Project
✅ PHP Programming ကို MYSQL Database နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Ecommerce Website Project
✅ Django Framework ဖြင့် Python Programming ကို အသုံးပြုပြီး Web Application Project
✔ Project များကို တစ် ယောက် စီမတူညီတဲ့ ပုံစံဖြင့် ရေးသားနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
💵On Jobအထိပြီးသူများ ကို IT Companyများတွင် Developer/Programmer ပိုင်းများ
ဖြစ်ခန့်အပ်ရန်CV Form များတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
🔑Web Engineering Course တက်ရောက်ပြီးသူများမှာ Japan နိုင်ငံ သို့
🇲🇲 ပြည်တွင်းရှိ IT Company များတွင် လစာ ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် များ ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Page Myanmar Web Training ကျောင်းသား၊သူများ ရဲ့Feedback များ
✅ >>> https://www.facebook.com/pmwebschool/posts/630964907664407
✅ >>> https://www.facebook.com/pmwebschool/posts/542129393214626
✅ >>> https://www.facebook.com/pmwebschool/posts/498561997571366
✅ >>> https://www.facebook.com/pmwebschool/posts/498555724238660
💯လူငယ်တိုင်းရဲ့အိမ်မက်များကို အလွယ်တကူဖြင့် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့
Myanmar’s No.1⃣ Professional Web Training
အဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Page Myanmar မှာ လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာရင်းအောင်မြင်တဲ့
🏫အမှတ် ၃၀B(၅လွှာ) ၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း ၊ လှည်းတန်း ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်။
📲Hotline- 09 25 43 43 133
အင်တာနက် နည်းပညာ ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင် Website နှင့် Application အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိ Customer များမှာလုပ်ငန်းအပေါ် ပိုမို ယုံကြည်မှုရှိခြင်း ၊ Online ကြော်ငြာများပိုမို ထိရောက်ခြင်း ၊တစ်နေရာထဲမှ Product များကို လွယ်ကူစုံလင်စွာရောင်းချနိုင်ခြင်း ၊ အခြားပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းများထက် ပိုမို အားသာချက်များရရှိခြင်း၊ မိမိလုပ်ငန်း ကို Online ပေါ်မှာ ပိတ်ရက်မရှိ အချိန်တိုင်း လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊စသဖြင့် များစွာ သော အားသာချက်များကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Customer Hotline – 0925 43 43 133 ကို ခုပဲ အသေးစိတ် ဆက်သွယ်ထားနော်…။
1. Web Page Unlimited စာမျက်နှာ အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ငန်းလို အပ်ချက်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်။
2. Web Server Storage and Bandwidth Unlimited Data များ နှင့် Online User များ အကန့်အသတ်မရှိ သုံးနိုင်မည်။
3. Security Web-Mail(လုပ်ငန်းနာမည်ဖြင့် Email အကောင့်များကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မည်။)
4. Money Back Guarantee (24 နာရီ အမြဲတမ်း Web Server Downtime လုံးဝမရှိ အာမခံ ချက် အပြည့်ရရှိမည်။)
5. Easy Admin Permission(မိမိ Computer မှ လွယ်ကူစွာ Product များ နှင့် Order များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်။)
6. Unique Website & App Design(လုပ်ငန်း တစ်ခုချင်း စီ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အထူး သီးသန့် Design ဖြင့်ရေးဆွဲပေးသည်။)
7. Free logo & icon(ဝဘ်ဆိုက် နှင့် အက်ပလီကေးရှင်း အတွက် အခမဲ့ Logo ရေးဆွဲပေးသည်။)
8. Free Maintenance(Update များကို အခမဲ့ ပြင်ဆင်ပေးသည်။)
9. SSL Security Certificate and More (SSL ကာကွယ်မှုအပြင် နည်းပညာမြင့် SECURITY ပိုင်းများ ပါဝင်သည်။)
10. Social Media Integration(Facebook , YouTube, Google စသဖြင့် Social Media ပိုင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။)
11. Amazing Price(မိမိလုပ်ငန်း အတွက် ကုန်ကျ စရိတ် အသက်သာဆုံး ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။)Page Myanmar(Web Development Service) များမှာ
Hotline – 09254343133
Address – အမှတ်30 ၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း ၊ လှည်းတန်း ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်။
1.AU Data Center မှ Authorized Distributor ရရှိထားသော ကြောင့် မြန်မာပြည်အတွက် ၂၄နာရီ Server Downtime လုံးဝမရှိခြင်း။
2.မိမိ Domain Name များ အားလုံးအတွက် SSL(Security Certificate) အခမဲ့ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
3.Security Web Mail System ပါဝင်ခြင်းကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်ပိုင် နာမည်ဖြင့် Email များပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မည်။
4.Customer Support ၂၄နာရီပါဝင်ခြင်းကြောင့် မည်သည့် Technical ပိုင်း ကို မဆို မေးမြန်းဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်။
5.Server Storage & Bandwidth Unlimited ပေးထားသော ကြောင့် Website Data နှင့် Online User များ အကန့်အသတ် မရှိ အသုံးပြုနိုင်မည်။
6.Wordpress နှင့် အခြား နာမည်ကျော် Web Application များ အားလုံး Build In ထည့်သွင်း ပေးထားသောကြောင့် တစ်ချက် နှိပ် Install ပုံစံဖြင့် မြန်ဆန် လွယ်ကူစွာ မိမိ Website ကို တည်ဆောက်နိုင်မည်။
7.အသက်သာ ဆုံး ဈေးနှုန်း 1 year ($48) မှ စပြီး မိမိ စိတ်ကြိုက် Cloud Hosting Plans များကို VISA card ရှိရုံဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း၊ သက်တမ်း တိုးခြင်းများကို လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။
8.လက်ရှိအသုံး ပြုနေသော Server Account 21,000 ကျော် နှင့် Domain Name 53,000 ကျော် ရှိသောကြောင့် မြန်မာ Developer များ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်သင့်သည် သာမက Asia အမြန်ဆုံး Cloud Web Hosting Server အဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။
#WebHosting #WordpressHosting #Domain #BestHosting #CloudHosting
Ecommerce Projects-Web Engineer Course
Copyright © 2022 PAGEmyanmar